ညီမလေး - Owl Myanmar News
“ဒေါကျ ဒေါကျ ဒေါကျ” “ဆရာ၊ ဆရာ၊ ဆရာကိုတာရာ၊ ခွံရှမှေ့ာ ဧညျ့သညျရောကျနတေယျ။” ထမငျးခကျြ အိမျထိနျး အဒျေါကွီး မနနျးပုံရဲ့ အခနျးတံခါးကို ဆကျတိုကျခေါကျသံနဲ့အတူ ခွံရှကေ့ လူချေါဘဲလျကိုအဆကျမပွတျ တီးသံကွောငျ့ ကနြျောလနျ့နိုးလာတယျ။ ကနြေျာ့လကျမောငျးပျေါ ခေါငျးအုံးပွီးအိပျနတေဲ့ ခမျးစုမီလဲ မကျြလုံးပှငျ့လာတယျ။ “မနနျးပုံ၊ မနကျအစောကွီး ဘယျကဧညျ့သညျလဲဗြ။” “ခမျးစုမီရညျးစား ဟိုအဆိုတျောကောငျလေးရောကျနတော။” ကနြျော ဝုနျးဆိုပွီး ခုတငျပျေါကခုနျဆငျးလိုကျမိတယျ။ အခနျးတံခါးကို ဆှဲဖှငျ့ပွီး လြှောကျလမျးကနေ ဧညျ့ခနျးထဲ ဝငျပွီး သော့တှဲကိုယူတယျ။ ပွီးတော့ အိမျတံခါးဖှငျ့ပွီး ခွံထဲကို ခွလှေမျးကြဲကြဲနဲ့ဖွတျလြှောကျလာတယျ။ ခွံဝမှာ သံပနျးတံခါးကိုကိုငျလှုပျလိုကျ၊ ဘဲလျတီးလိုကျ လုပျနတေဲ့ စဝျခှနျနောငျကို တှရေ့တယျ။ သူ့ဘေးမှာလဲ ခရီးဆောငျအိတျတဈအိတျကို မွကွေီးပျေါခထြားတယျ။ ခုမှ ကားပျေါကဆငျးလာပွီး အိမျတောငျ မပွနျရသေးတဲ့ပုံပဲ။
ကနြျော သော့ဖှငျ့ပွီး သံပနျးတံခါးကို ဆှဲဖှငျ့ပေးရငျး မေးလိုကျတယျ။ “ခှနျနောငျ၊ မငျးဘာဖွဈလာတာလဲ။ အေးအေးဆေးဆေး ပွောလို့ရပါတယျ။” ကနြျောတံခါးကို ဆှဲဖှငျ့ပေးလိုကျရငျပေးလိုကျခငျြးပဲ ခှနျနောငျက ဝုနျးကနဲပွေးဝငျလာတယျ။ ပွီးတော့ ဘာမပွောညာမပွော ကနြေျာ့မကျြနှာကို လကျသီးနဲ့ပဈထိုးလိုကျတယျ။ “ခှပျ” “စိုငျးတာရာမောငျ၊ ဒါတှအေားလုံး ခငျဗြားကွောငျ့၊ ခငျဗြားဇာတျလမျးရှုပျလို့ဖွဈရတာ။” အလဈမို့ ကာခြိနျမရဘဲ ခံလိုကျရတယျ။ လကျသီးက အပျေါနှုတျခမျးနရောကိုကလြာပွီး မကျြစိထဲမှာ မီးပှငျ့သှားတယျ။ ပါးစပျထဲမှာငနျကြိကြိအရသာ ရလာတယျ။ နှုတျခမျးကှဲသှားပွီဆိုတာသိလိုကျတယျ။ အသားနာသှားတာနဲ့တပွိုငျနကျတညျး စဉျးစားခြိနျမရလိုကျဘဲ ခှနျနောငျ့ဂြာကငျကျောလာကို စုကိုငျပွီး မကျြခှကျကို ပွနျထိုးလိုကျတယျ။ နှာခေါငျးကိုထိပွီး သှေးတှကေလြာတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ အိမျထဲက ပွေးထှကျလာတဲ့ ခမျးစုမီရယျ မနနျးပုံရယျ၊ ခွံစောငျ့အိမျထဲက မွကျခုတျဓားတဈခြောငျးဆှဲ ပွီးထှကျလာတဲ့ မနနျးပုံယောကျြား ဗဟာဒူးရယျ ခွံဝကိုရောကျလာကွတယျ။
“ခှနျနောငျ နငျဘာလာလုပျတာလဲ” ခမျးစုမီက အံကွိတျထားတဲ့ကွားက ထှကျလာတဲ့လသေံနဲ့မေးတယျ။ “နငျ့ကိုငါလာတောငျးပနျတာ။” “ငါအမြိုးမြိုး တောငျးပနျတိုးလြိုးခဲ့တုနျးက နငျအသညျးမာမာနဲ့ လုပျခငျြရာလုပျခဲ့ပွီး အခုမှ လိုကျလာရသလား။မလိုတော့ဘူးခှနျနောငျ။” “ငါအခု ဆုပနျရှယျကို ဖွတျခဲ့ပွီစုမီ။ နငျ့ကိုဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ လကျခံဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပွီ။ နငျ့စိတျထဲမှာဖွဈခငျြတာဖွဈနပေါစေ ငါလကျခံမယျ။ ပွသနာမရှာတော့ဘူး။” ခှနျနောငျက နှာခေါငျးဝကသှေးတှကေို ဝတျထားတဲ့တီရှပျနဲ့သုတျရငျး ပွောတယျ။ သူတို့ နှဈယောကျပွောနတေဲ့စကားတှကေို ကနြျောအပွညျ့အဝနားမလညျဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကွားထဲမှ ရှငျးဖို့လိုနတေဲ့ ပွသနာတဈခုရှိနမှေနျးသိတယျ။ ပါးစပျထဲမှာ ပွညျ့လာတဲ့ တံတှေးနဲ့ရောနတေဲ့သှေးတှကေို ထှေးထုတျလိုကျရငျး မနနျးပုံနဲ့ ဗဟာဒူးကို တျောရာသှားနဖေို့လကျပွလိုကျတယျ။
“မရဘူး။ ဒီဇာတျလမျးကို နငျဖွတျခဲ့တာ။ အခုမှပွနျဆကျဖို့မကွိုးစားနဲ့တော့။ ငါတတျနိုငျသမြှ နငျစိတျကနြေပျအောငျ နပေေးခဲ့တယျ။ နငျ့ရဲ့စှပျစှဲမှုတှအေောကျမှာ ငါအရမျးစိတျဆငျးရဲခဲ့ရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငါကြိတျမှိတျနခေဲ့ပါတယျ။ နငျတကျခိုငျးတဲ့အတိုငျး မန်တလေးကိုလညျး ကြောငျးပွောငျးတကျခဲ့တယျ။ ဒါကိုနငျကမကနြေပျနိုငျဘူး။ အမွဲတမျး ပွဿနာအမြိုးမြိုးရှာတယျ။ မကမြေနပျပဲ ဖွဈနတေယျ။ နောကျဆုံး ငါနငျ့အနားမှာ မနနေိုငျတော့တဲ့အထိလုပျတယျ။ အဲဒီလိုတှေ လုပျခဲ့ပွီးမှ ပွနျလာခဲ့ပါလို့ ချေါတာကို ငါဘယျလိုလိုကျရမလဲ။” ခမျးစုမီမကျြနှာလေးက နီရဲနတေယျ။ မကျြလုံးညိုညိုတှထေဲမှာ မကျြရညျတှလေညျလာတယျ။ “ခှနျနောငျ၊ မငျးတို့ပွဿနာတှေ ငါမသိဘူး။ ဒါပမေယျ့ ခမျးစုမီကို မငျး စိတျဆငျးရဲအောငျ လုပျခဲ့တာတော့သခြောတယျ။ ပွီးတာတှေ ထားလိုကျတော့။ နောကျထပျတော့စိတျဒုက်ခမပေးပါနဲ့။”
“ဟားဟားဟား…” ကနြျောဝငျပွောလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ခှနျနောငျက ခေါငျးကို နောကျလှနျခပြွီး ဟကျဟကျပကျပကျ ရယျလိုကျတယျ။ မကျြနှာနဲ့ သှားတှပေျေါမှာ သှေးတှပေကြေံနတေဲ့ သူ့ပုံစံက အရူးတဈယောကျနဲ့တူနတေယျ။ “ဒီမှာ၊ ကြုပျနဲ့ စုမီနှဈယောကျတညျးရှိရငျ လောကကွီးက သာသာယာယာပဲဗြ။ ခငျဗြားရှိလို့ ရှုပျနတော။ ခမျးစုမီကို တလြောကျလုံး စိတျဒုက်ခအပေးခဲ့ဆုံးလူဟာ ခငျဗြားပဲ။” “ခှနျနောငျ၊ နငျကိုကို့ကို ဒီလိုမပွောနဲ့” “ငါပွောတာအမှနျတှမေဟုတျဘူးလား။ ဟိုက နငျ့ကို ရှိတယျထငျလား။ နငျကသာတဖကျသတျကွိုကျနတော။ ညီမလိုဂရုစိုကျတာကို သာယာနတော။ သူကအခြိနျတနျရငျ စငျကာပူက သူ့ရညျးစားနဲ့သူ ယူသှားမှာ။ နငျ့ကိုထားခဲ့မှာ။ ဒါကို နငျက သံယောဇဉျမပွတျနိုငျဘူး။ ငါနဲ့ကွိုကျတာတောငျမှ သူက နငျ့ကိုတှဲမှာမဟုတျဘူးဆိုတာသခြောလို့ စိတျလပွေီးတှဲခဲ့တာမဟုတျဘူးလား။” ကွားရတဲ့စကားတှကွေောငျ့ ကနြျောအံ့အားသငျ့သှားမိတယျ။ ခှနျနောငျဘာတှပွေောနတောလဲ။
“အတိတျကဖွဈခဲ့တာတှေ ငါဘယျလိုတတျနိုငျမှာလဲ။ နငျနဲ့တှဲကတညျးက နငျ့အပျေါငါ တကယျစိတျရငျးအမှနျနဲ့ခဈြခဲ့တယျ။ နငျဖွဈခငျြတာတှကေိုလဲ တတျနိုငျသမြှလိုကျလြောခဲ့တယျ။ အဲဒါကို နငျကမကနြေပျနိုငျဘဲ အမွဲတမျးပွသနာရှာနခေဲ့တာ။ အခု အရှဲ့တိုကျပွီး တခွားမိနျးမနဲ့ကွိုကျတယျ။ ငါအသညျးလဲကှဲရတယျ၊ အရှကျလဲကှဲရတယျ။ “ “မရှာဘဲ ဘယျလိုနရေမှာလဲ။ နငျ့စိတျက ငါ့ကိုခဈြတယျသာပွောတာ နငျဟိုကောငျ့ကို မသိစိတျထဲကမြှျောလငျ့နတော သိနတောပဲ။ တလြှောကျလုံး ငါ့မှာ ခံစားခဲ့လိုကျရတာ။ ငါ့ကိုတကယျခဈြရငျ ကြောငျးပွီးခါနီးလကျမှတျထိုးထားမယျဆိုတာလဲ ထိုးနိုငျရမှာပေါ့။ နငျကခါးခါးသီးသီးပဲ။” “ငါ့အသကျ ၂၀၊ ယောကျြားယူရမယျ့အရှယျမဟုတျသေးဘူး။ “ ခှနျနောငျက အရူးလိုထပျရယျပွနျတယျ။ ခမျးစုမီရဲ့ ပခုံးနှဈဘကျကို ဆှဲခါတယျ။ ကနြျောသူ့လကျတှကေို ဆှဲဖွုတျပွီး ရငျဘတျကိုဆောငျ့တှနျးလိုကျတယျ။ မီ့ကို ကနြေျာ့နောကျကြောဘကျကို ပို့ထားလိုကျတယျ။
“ဒီမှာစုမီ၊ နငျအပိုတှမေပွောနဲ့။ နငျ့စိတျနငျပွနျကွညျ့။ ငါနဲ့တော့ ငယျသေးတယျတဲ့။ စိုငျးတာရာမောငျကသာနငျ့ကိုယူမယျဆိုရငျ နငျယူမှာမဟုတျဘူးလား။ မလိမျဘဲ အမှနျအတိုငျးဖွေ။” ခမျးစုမီငိုနပွေီ။ မကျြနှာလေးက နီစုတျပွီး မကျြခှံတှမေို့နတေယျ။ နှုတျခမျးကို ကိုကျထားပွီး ကြိတျကြိတျပွီးရှိုကျနတေယျ။ “ဟုတျတယျ၊သူကသာယူမယျဆိုရငျ ယူမှာ။ ငါ့ဘဝမှာ ငါ့အပျေါကောငျးတာ သူတဈယောကျပဲရှိတယျ။ သူ့ကိုငါခဈြတယျ။ နငျ့ကိုပွောငျးခဈြဖို့ ငါကွိုးစားခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ နငျက စိတျမလုံခွုံဘဲ ငါ့ကိုအမွဲသဝနျတိုခဲ့တယျ။ နငျအဲလိုလုပျတာတှကေ ငါ့ကိုဝေးအောငျတှနျးပို့နသေလိုပဲ။ အခု ငါသိပွီ။ နငျ့ကိုဘယျလိုမှ ခဈြလို့မရဘူး။ နငျနဲ့ငါဇာတျလမျးပွီးပွီ၊ နငျပွနျတော့။” ခမျးစုမီက ခြာကနဲလှညျ့ပွီး အိမျထဲကိုပွေးဝငျသှားတယျ။ ခှနျနောငျက ပွေးလိုကျဖို့ပွငျတယျ။ လကျမောငျးတဖကျက လညျပငျးကိုနောကျကြောကနေ ဖကျညှဈထားပွီး ကနျြတဲ့လကျတဖကျနဲ့ သူ့လကျနှဈဖကျကို နောကျကြောမှာ ပူးကိုငျပွီးခြုပျထားလိုကျတယျ။
“ဒီမှာခှနျနောငျ၊ ဖွဈခဲ့တာအကုနျလုံးအတှကျ ငါစိတျမကောငျးပါဘူး။ ဘယျသူမှ တမငျတကာလုပျခဲ့တာလဲ မပါဘူး။ သူ့အလိုအလြောကျ ဖွဈလာတဲ့ကိစ်စတှမေို့ မငျးလညျး ခုခြိနျမှာ ဘာမှ ပွောငျးလဲလို့ရတော့မယျမထငျဘူး။ ငါခမျးစုမီကို အရငျက ညီမလိုပဲ။ ဟုတျတယျ။ အခုရညျးစားလိုကွိုကျတယျ။ အဲဒီတော့ မငျးပွနျပါတော့။ ရညျးစားအသဈနဲ့ ပြျောပြျောနပေါ။” သူ့နားနားကို ကပျပွီး လသေံအေးအေးနဲ့ပွောရငျး ခွံပွငျကို ဆှဲထုတျလာခဲ့တယျ။ ခွံတံခါးကြျောတော့ လှတျပေးလိုကျပွီး သူ့ခရီးဆောငျအိတျကို လကျထဲကောကျထညျ့ပေးလိုကျတယျ။ ခှနျနောငျက အိတျကို ယူလိုကျပွီး နီရဲနတေဲ့မကျြလုံးတှနေဲ့ ကနြေျာ့ကို အံကွိတျပွီးကွညျ့တယျ။ ခွံတံခါးကို နှဈခကျြသုံးခကျြ ဆောငျ့ကနျတယျ။ ပွီးတော့ မလှမျးမကမျးက ဆိုကျကယျတကျစီ ဂိတျဘကျကို ခွလှေမျးကွဲကွဲနဲ့ ထှကျသှားတယျ။
တံခါးကို သော့ပွနျခတျရငျး ကနြေျာ့အတှေးတှေ ခြာခြာလညျနတေယျ။ မီနဲ့ ခှနျနောငျ ပွဿနာဖွဈကွတာ ကနြေျာ့ကွောငျ့ဖွဈမယျလို့ တဈခါမှမထငျခဲ့မိဘူး။ ပိုဆိုးတာက မီကနြေျာ့ကို စိတျဝငျစားနလေိမျ့မယျလို့ သိကိုမသိခဲ့ဘူး။ အိမျဘကျကို ပွနျလြှောကျလာတဲ့ခွလှေမျးတှဟော လထေဲမှာလြှောကျနရေသလိုပဲ။ အခနျးတံခါးကို ဆှဲဖှငျ့လိုကျတော့ သူမရှိတော့ဘူး။ စိတျပူသှားပွီး သူ့အခနျးထဲပွေးကွညျ့မိတယျ။ ပနျးနုရောငျ အိပျရာခငျးတှနေဲ့ မိနျးကလေးဆနျဆနျ ပွငျဆငျထားတဲ့ ခုတငျလေးပျေါမှာ အမှေးပှစောငျကို အလုံးလိုကျလေးခွုံထားပွီး တသိမျ့သိမျ့ရှိုကျငိုနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျလေးကိုမွငျမှ စိတျအေးသှားတယျ။ စောငျကိုဆှဲဖယျပွီး သူ့ကိုယျလုံးလေးကိုဖကျထားမိတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၄ နှဈကလိုပဲ ကနြေျာ့ပခုံးမှာ ပူနှေးတဲ့ သူ့မကျြရညျတှနေဲ့စိုရှဲသှားတယျ။
ပခုံးပျေါကို စီးကနြတေဲ့မကျြရညျနှေးနှေးတှေ စဲသှားတဲ့အခြိနျအထိ၊ ရှိုကျသံလေးတှေ ကြဲသှားတဲ့အခြိနျထိ သူ့ကြောလေးကို ပှတျပေးရငျး ဖကျထားပေးမိတယျ။ “ကိုကို လုံးဝမသိခဲ့ဘူး၊ နညျးနညျးလေးမှတောငျ မရိပျမိခဲ့ပါဘူး။ ကိုကိုတောငျးပနျပါတယျ မီရယျ။” သူ့ခေါငျးထိပျကလေးကို နမျးရှိုကျရငျး နူးညံ့တဲ့ ဆံပကျပြော့ပြော့လေးတှထေဲကို ခပျတိုးတိုးပွောမိတယျ။ “သိခဲ့ရငျ… ပိုဆိုးမှာပေါ့။ ကိုကို့မှာ မအမေီရှိတာပဲ။ ပွီးတော့… မီ့အပျေါ… ကိုကိုရိုးရိုးသားသားပဲ သဘောထားတာ… မီသိပါတယျ။” သူက ရှိုကျသံလေးတဝကျနဲ့ ပွတျတောငျးပွတျတောငျးလေးပွောတယျ။ အမေီနဲ့ဆကျဆံရေးကို သူ့ကို ရှငျးမပွခဲ့မိတဲ့အတှကျ ကနြျော အကွီးအကယျြနောငျတရမိတယျ။ “ညီမလေးထငျသလိုမဟုတျဘူး မီ။ ကိုကိုနဲ့အမေီက အဲလိုဆကျဆံရေးမြိုးမဟုတျဘူး။ နောကျမှရှငျးပွမယျ။ ခုခြိနျမှာတော့ ကိုကိုနဲ့အမေီဟာ ဘာနှောငျကွိုးမှမရှိဘူးဆိုတာ မှတျထားပေးပါ။”
သူ့ရှိုကျသံလေးတှေ ပွနျစိပျလာပွနျတယျ။ ရငျခှငျထဲက ကိုယျလုံးနှေးနှေးလေးဟာ တသိမျ့သိမျ့ခါနတေယျ။ “မီ့ကို… ခဈြမယျ့သူတဈယောကျမှမရှိဘူး။ ဖဖေကေလဲ… မီမှတျမိတဲ့အခြိနျမှာ သသှေားပွီ။ မမေကေလဲ… သူ့ကိုယျသူပဲခဈြတယျ။ မီကလဲ ဘယျသူ့ကိုမှ မခဈြဘူး။ အိမျပွောငျးလာတဲ့နေ့ ကိုကိုနဲ့တှတေဲ့အခြိနျကစပွီး… မီ့ကိုခဈြမယျ့သူရလာတယျ။ အဲဒီနကေ့ ကိုကိုဖကျထားပေးတာ ခုထိမှတျမိသေးတယျ။ အခု…ဖကျထားသလိုမြိုးပဲ။ ကိုကိုနိုငျငံခွားသှားတဲ့အခြိနျက…အရမျးဝမျးနညျးတာ။ တဈရကျမှ မပြျောဘူး။ ကိုကိုနဲ့စကားပွောရရငျ ပိုလှမျးတယျ။ အဲဒါကွောငျ့…နောကျပိုငျး ဖုနျးမပွောတော့ဘူး။” “ကိုကို မသိခဲ့ဘူး မီရယျ။ အဲဒီတုနျးက ဘာလို့မတားခဲ့တာလဲ။ “ “မီ မန်တလေးမှာကြောငျးသှားတကျမှာ ကိုကိုမတားသလိုပဲပေါ့။ မတားရကျဘူး…ကိုကို့ဘဝကို ခြုပျမထားခငျြဘူး။”
သူ့မေးလေးကို ဆှဲမော့ပွီး မကျြရညျတှစေိုရှဲ မို့အဈနတေဲ့ မကျြနှာဖူးဖူးလေးကို နရောအနှံ့နမျးမိတယျ။ သူ့မကျြရညျတှကေို ကနြေျာ့ပါးနဲ့သုတျလိုကျ၊ လကျနဲ့သုတျလိုကျ၊ မကျြရညျပစှေနျးနတေဲ့ မကျြလုံးလေးတှေ၊ ပါးလေးတှေ၊ နဖူးလေးတှေ၊ နှုတျခမျးလေးတှကေို ညငျညငျသာသာလေး နမျးလိုကျနဲ့ သူအငိုတိတျစပွုလာတယျ။ ကနြေျာ့ နှုတျခမျးကို သူ့နှုတျခမျး နှေးနှေးစိုစိုလေးတှနေဲ့ ဖှဖှလေး ပွနျနမျးတဲ့အခြိနျ ရငျထဲမှာ လှိုကျခနဲဖွဈသှားတယျ။ ဒါ သူ့ဆီကရဖူးတဲ့ ပထမဆုံး တုံ့ပွနျအနမျးပဲ။ ကနြေျာ့နှုတျခမျးနဲ့ သူ့နှုတျခမျးကို မထိတထိ ကပျထားရငျး သူကဆကျပွောတယျ။ သူ့အသံလေးကို အနီးကပျကွားရရုံမကဘူး နှုတျခမျးကပါ အသံလှိုငျးရဲ့တုနျခါမှုလေးကို ခံစားရတယျ။ ” ကိုကိုပွနျလာတော့ အရမျးပြျောတယျ၊ ဒါပမေယျ့ဟိုမှာ ရညျးစားကနျြခဲ့တဲ့အကွောငျး သိလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ ကိုကိုတဈနေ့ အိမျထောငျပွုမှာပဲ၊ မီတဈယောကျတညျးကနျြခဲ့မှာပဲဆိုတဲ့အတှေးဝငျလာတယျ။
ကိုကိုနဲ့အတူ အရမျးပြျောရတဲ့နရေ့ကျတှေ တဈနမှေ့ာအဆုံးသတျသှားမှာတှေးမိတိုငျး အရမျးဝမျးနညျးခဲ့တယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မီလညျး ဘဝမှာ ကိုယျ့ကိုယျပိုငျဖွဈမယျ့ လူတဈယောကျကို ရှာဖို့ကွိုးစားမိတယျ။ မီ့တသကျလုံးမှာ အကွီးဆုံးအမှားပဲ။ ကိုကို့နရောမှာ ဘယျသူနဲ့မှ အစားထိုးလို့မရဘူး။ “ သူ့ရဲ့ တိုးတိတျညငျသာတဲ့ တဈခှနျးခငျြး စကားသံလေးကိုနားထောငျရငျး ကနြေျာ့ရငျထဲမှာ ဆို့နဈလာတယျ။ မှတျမိသလောကျ အမဆေုံးကတညျးက တဈခါမှထပျမကခြဲ့တဲ့မကျြရညျတှဟော မကျြလုံးထဲမှာ အိုငျဖှဲ့လာတယျ။ ” အခု အစားထိုးစရာ မလိုတော့ဘူး။ အစကသိခဲ့ရငျ ညီမလေးကို ဒီဟာတှအေားလုံးကို တှကွေုံ့ဖွတျသနျးရအောငျ နာကငျြရအောငျ လုံးဝအဖွဈခံခဲ့မှာမဟုတျဘူး။ မီ့ကို ကိုကိုခဈြတယျ။ အရငျက ကလေးလိုခဈြတယျ၊ အခု ကလေးလိုရော ခဈြသူလိုရောခဈြတယျ။” ပွောပွီးတော့ သူ့နှုတျခမျးလေးကိုနောကျတဈခါ နမျးလိုကျတယျ။ စောစောကအနမျးက မတ်ေတာအပွညျ့နဲ့ နမျးတဲ့အနမျး။ အခုတဈကွိမျက မတ်ေတာရော ရမ်မကျပါ ရောပွှမျးတဲ့အနမျး။ ညငျညငျသာသာ နမျးရငျးကနေ တဖွညျးဖွညျး ပွငျးထနျလာတယျ။ သူ့နှုတျခမျးပနျးသှေးရောငျ ဖူးဖူးလေးတှကေို အထကျနှုတျခမျးတဈလှညျ့ အောကျနှုတျခမျးတဈလှညျ့ ကွမှေမတတျ နမျးစုပျမိတယျ။ ကနြေျာ့မကျြရညျတဈစကျက သူ့ပါးပွငျပျေါ ကသြှားတယျ။ သူ့ပါးစပျလေးထဲကို လြှာကိုထိုးသှငျးပွီး ပါးလှဈခြိုမွတဲ့ သူ့လြှာလေးနဲ့ ပှတျတိုကျကစားရငျး ကတ်တီပါသားလို နူးညံ့ခြောမှတျတဲ့ ပါးစောငျလေးတှေ၊ ညီညာတဲ့ သှားတနျးလေးတှေ၊ သှားဖုံးသားလေးတှကေို စူးစမျးမိတယျ။
နမျးနရေငျး ကနြေျာ့လကျက ညကဖွုတျခဲ့တဲ့ သူ့ညဝတျအကငြ်္ီရငျဘတျကွယျသီးလေးတှကေို တဈခါ ထပျဖွုတျမိပွနျတယျ။ ဒီတဈခါတော့ သူ့အကငြ်္ီလေးကို တဈခါတညျး ခြှတျပဈလိုကျတယျ။ နို့သီးထိပျပနျးနုရောငျလေးတှေ စိတျလှုပျရှားမှုနဲ့ တငျးတောငျနတေဲ့ နုအိတဲ့ ရငျသားထှားထှားတဈစုံကို ဒုတိယအကွိမျ မွငျရပွနျတယျ။ သူကလညျး ကနြေျာ့ တီရှပျလကျရှညျကို ခါးကနေ ကိုငျပွီး မခြှတျပေးတယျ။ ကနြျော လကျနှဈဘကျကို အလိုကျသငျ့ မွှောကျပေးလိုကျတယျ။ နှဈယောကျလုံး အပျေါပိုငျး ဗလာကငျြးသှားကွတဲ့အခါ ညက မခြှတျရကျခဲ့တဲ့ သူ့ ညဝတျဘောငျးဘီလေးကို ဆှဲခြှတျလိုကျပွီး ကနြေျာ့ အားကစားဘောငျးဘီကိုလညျး ခြှတျခလြိုကျတယျ။ သူ့အိပျရာလေးပျေါမှာ ကနြျောတို့နှဈယောကျ မိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျးနဲ့ ကမ်ဘာဦးကလူသားနှဈယောကျလို ဖွဈနကွေတယျ။ အဝတျတှကေ ကွမျးပွငျပျေါမှာ ပုံကနြတေယျ။ သူ့နို့လေးတှကေို ကနြေျာ့လကျဖဝါးနှဈဘကျထဲမှာ ဆုပျနယျပေးတော့ သူခပျတိုးတိုးလေး ညညျးတယျ။ နို့သီးခေါငျးလေးနှဈဖကျကို တလှညျ့စီစို့ရငျး လြှာနဲ့ဝိုကျပွီး ကစားပေးလိုကျတယျ။ နို့အုံသား ဝငျးဝငျးလေးတှကေိုပါ နမျးစုပျမိတယျ။ သူ့အသားက နုတော့ ခပျကွမျးကွမျးစုပျမိတဲ့ တခြို့နရောလေးတှမှော သှေးခညျြဥပွီး ရဲလာတယျ။ ညကလို အပွဈရှိတဲ့ခံစားခကျြကွီးနဲ့ မဟုတျတော့တဲ့အခါ ခံစားခကျြတှဟောပိုကောငျးပွီး ပိုပွီး ပွငျးထနျလာတယျ။
အသကျမရှူစတမျး နမျးစုပျနပွေီး မောလာလို့ နှုတျခမျးကို ခဏခှာလိုကျတဲ့အခါ သူက မထငျမှတျတာတဈခုကို လုပျလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့ခါးကိုဖကျပွီး ရငျခှငျထဲကို ခေါငျးတိုးဝငျပွီး ကနြေျာ့နို့သီးခေါငျးတဈဖကျကို စို့ပေးတယျ။ သူ့တံတှေးလေးတှနေဲ့ စိုရှဲနတေဲ့ နို့သီးခေါငျးကို လြှာနှေးနှေးလေးနဲ့ လကျြပေးတဲ့အခါ ဓာတျလိုကျသလိုခံစားခကျြဟာ ပေါငျကွားထဲအထိ ကဉျြတကျသှားတယျ။ နှဈဖကျလုံးကို စို့ပွီးတဲ့အခါ ကနြေျာ့လိငျတံဟာ နောကျထပျ ဒီထကျပိုပွီး မမာနိုငျတော့ဘူးလို့ထငျရတဲ့အထိ မာတောငျလာတယျ။ ရမ်မကျလှိုငျးတှဟော ဒီရလေိုတရိပျရိပျတိုးလာတယျ။ ရုတျတရကျ ကနြျောညကတညျးက လုပျခငျြပမေယျ့ ပုံမှနျစိတျနဲ့ဆို လုပျဖွဈမှာမဟုတျတဲ့ အလုပျတဈခုကို လုပျလိုကျမိတယျ။ ခုတငျအောကျကိုဆငျးပွီး သူ့ကို ခုတငျစှနျးမှာ ခွတှေဲလောငျးခထြိုငျတဲ့အနအေထားရောကျအောငျ ဆှဲယူလိုကျတယျ။ ခုတငျက နိမျ့တော့ သူ့ခေါငျးလေးနဲ့ ကနြေျာ့ခါးနဲ့ ကှကျတိပဲ။ လိငျတံကို ကိုငျပွီး စောစောကနမျးထားတဲ့အရှိနျနဲ့ နှငျးဆီဖူးလေးလို ထူအမျးဖောငျးကွှနတေဲ့ နှုတျခမျးနှဈလှာကွားကို ထိပျဖူးကို ထိုးထညျ့လိုကျတယျ။ သူက မကျြလုံးလေးမှိတျပွီး အလိုကျသငျ့လေးဟပေးတယျ။ သူ့ပါးစပျလေးနဲ့ ဖောငျးကားတငျးမာနတေဲ့ ကနြေျာ့ထိပျဖူးဟာ ဆံ့တယျဆိုရုံလေးပဲ။ ကတ်တီပါသားလို နူးညံ့စိုစှတျပွီး ကဉျြးမွောငျးတဲ့ ပါးစပျကလေးထဲကို တိုးဝငျရတဲ့ခံစားခကျြဟာ ကောငျးလှနျးလို့ ဖျောပွလို့မရဘူး။ လြှာဖြားလေးနဲ့ ထိပျဖူးအရဈကို ပတျခြာလညျ လကျြပွီး အကှဲကွောငျးလေးကို ထိုးကလိပေးလိုကျတဲ့အခါ ကနြေျာ့ကိုယျထဲက အကွောပေါငျးတဈထောငျဟာ စိမျ့သှားပွီး သူ့ခေါငျးလေးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ အုပျကိုငျပွီးအတံသုံးပုံနှဈပုံလောကျအထိ ထိုးသှငျးလိုကျမိတယျ။ နောကျထပျသုံးမိနဈလောကျ သူ့ပါးစပျကလေးနဲ့ စုပျပေးတာကို ခံရတဲ့အခါ နတျစညျးစိမျဆိုတာ ဒီလိုဟာမြိုးပဲလို့ ကနြျောသခြောသှားတယျ။
ခဏနတေော့ ကနြေျာ့လိငျတံကို သူ့ပါးစပျထဲက ခြှတျလိုကျပွီး သူ့ကို အိပျရာပျေါ သာသာလေး လှဲခလြိုကျတယျ။ သူကလဲ ကနြေျာ့ခါးကိုဖကျပွီး သူ့အပျေါ ဆှဲမှောကျတယျ။ အိပျရာပျေါမှာ မိတျလိုကျနတေဲ့မွှနှေဈကောငျလို ခဏတာ ပူးယှကျတှနျ့လိမျနပွေီးတော့ ကနြေျာ့လကျဟာ တဈခါမှ မစမျးဖူးတဲ့ သူ့ပေါငျကွားက အင်ျဂါဇာတျလေးကို အုပျကိုငျမိတယျ။ အညိုရောငျ အမှေးနုလေးတှနေဲ့ မို့မို့ဖောငျးဖောငျးလေး။ ပေါငျလေးနှဈဖကျကို ဆှဲကားပွီးကွညျ့လိုကျတော့ နှုတျခမျးသားဖောငျးဖောငျးလေးတှဟော ပနျးညိုရောငျသမျးနတေယျ။ အရညျကွညျလေးတှထှေကျပွီး နှုတျခမျးသားနှဈဖတျလုံး စိုလကျနတေယျ။ လကျခြောငျးတှနေဲ့ နှိုကျကစားပေးတော့ ကနြေျာ့ကိုယျလုံးအောကျမှာ သူတှနျ့လိမျညညျးတှားနတေယျ။ “ကိုကို…ကိုကို… ” လို့ချေါနတေဲ့ အသံသဲ့သဲ့လေးဟာ တဈစုံတဈရာကို တောငျးဆိုနတေယျ။ ကနြျော သူ့ပေါငျလေးနှဈဖကျကို နညျးနညျးထပျပွီးဆှဲကားလိုကျရငျး ကွားထဲကလှတျသှားတဲ့နရောမှာ ဒူးထောကျနရောယူလိုကျတယျ။လကျတဈဖကျကိုထောကျထားရငျး လိငျတံကို ကနျြတဲ့ လကျတဈဖကျနဲ့ကိုငျပွီး အကှဲကွောငျးလေးထဲက လမျးကွောငျးအဝလေးထဲကို ထိပျဖူးကို ထိုးသှငျးလိုကျတယျ။ စီးပိုငျပွီး နှေးနှေးကပျြကပျြလေးဖွဈနပေမေယျ့ သူ့အရညျလေးတှရေော၊ ကနြေျာ့အရညျကွညျတှရေောပေါငျးပွီး ခြောဆီလိုဖွဈနလေို့ ထိပျဖူးတော့ ဝငျသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ မြှျောလငျ့မထားတဲ့ အတားအဆီးတဈခုကို ဒုတျခနဲ တိုးမိပွီး ကနြျောတနျ့သှားတယျ။ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ထငျပွီး ဆကျတိုးကွညျ့တော့ တကယျဖွဈနတေယျ။ ကနြေျာ့ရငျတှေ တဒိုငျးဒိုငျးခုနျလာတယျ။ စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ မကျြလုံးတှတေောငျပွာလာသလိုပဲ။ ခွောကျကပျနတေဲ့လညျခြောငျးထဲက အနိုငျနိုငျထှကျလာတဲ့အသံက ပွတျတောငျးပွီး အကျကှဲနတေယျ။
“ခှနျနောငျနဲ့ တဈခါမှ…. ငုံ့ကွညျ့လိုကျတော့ သူလဲ အသကျကို အမောတကောရှူနရေတယျ။ ရငျဘတျလေးဟာ စိတျလှုပျရှားမှုနဲ့ လှိုငျးထနတေယျ။ “တခွားဟာတှေ လုပျဖူးတယျ…တဈခါမှ…ဒီအထိမရောကျဖူးဘူး။” တိုးတိတျတဲ့ဖွသေံလေးအဆုံးမှာ ကနြျောသူ့ကို ငုံ့ပွီးနမျးလိုကျမိတယျ။ နှုတျခမျးကို အငမျးမရ နမျးစုပျရငျး သူ့ကို ကဈြကဈြပါအောငျ ဖကျထားမိတယျ။ နမျးပွီးသှားတောိ့ကိုယျလုံးလေးကို လကျတဈဖကျနဲ့ ဆကျပွီးဖကျထားရငျး ကနျြတဲ့တဈဖကျကို ထောကျပွီး ထိပျဖူးရဲ့ရှမှေ့ာ တားဆီးနတေဲ့ အမွှေးပါးလေးထဲကို ထိုးသှငျးလိုကျတယျ။ ဒုတျခနဲ ဆောငျ့မိသှားပွီး အ…ဆိုတဲ့ အံကွိတျညညျးတှားလိုကျသံလေးနဲ့အတူ အတားအဆီးဟာ ကြိုးပွတျသှားတာကို ခံစားလိုကျမိပွီး ကပျြတညျးတဲ့ ကတ်တီပါလှိုဏျခေါငျးလေးထဲကို ကနြေျာ့လိငျတံဟာ လြှောဝငျသှားတယျ။ ခဏနားထားပွီး သူ့ကို ပှတျသတျခြော့မွူရငျး စပွီး ရှတေို့းနောကျဆုတျ လှုပျရှားလိုကျတယျ။
သူ့ခန်ဓာကိုယျလေးဟာ ကနြေျာ့အောကျမှာ လူးလှနျ့နတေယျ။ တဈခကျြတဈခကျြ ညညျးတှားသံ တိုးတိုးလေးနဲ့အတူ ခါးလေးကို ပငျ့ပွီးကော့ပေးတယျ။ ကနြေျာ့ကြောကို မမီတမီလှမျးဖကျထားတဲ့ လကျလေးနှဈဖကျက လကျသညျးလေးတှဟော ကနြေျာ့အသားထဲကို နဈဝငျနတေယျ။ သူ့နို့လေးတှေ၊ ခါးသေးသေးလေး၊ တငျပါးလေးတှဟော ကနြေျာ့လကျထဲမှာ ပုံသှငျးရှံ့စေးလိုပဲ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့ပွီးဆုံးခွငျးဟာ နီးကပျလာတယျ။ လိငျတံဟာ ပိုတောငျ့တငျးလာပွီး အထဲမှာ သုကျရညျတှေ ရှလြေ့ားလာတာကို ခံစားမိလာတယျ။ ကနြျောသူ့အပျေါ မှောကျခလြိုကျပွီး ဆီးခုံခငျြးပူးကပျရငျး သှေးတှစေီးဝငျပွီး ဖောငျးကွှနတေဲ့ အစနေ့ရောလေးကို လိငျတံနဲ့ ပှတျတိုကျပေးပွီး ရှတေို့းနောကျဆုတျ ဆကျလုပျတယျ။ ထိလိုကျလှတျလိုကျဖွဈပမေယျ့ သူလညျး ပွီးဆုံးဖို့ တဖွညျးဖွညျးနီးကပျလာတာကို ခံစားမိတယျ။ ကနြေျာ့ခံစားခကျြတှဟော ပေါကျကှဲထှကျလုမတတျပွငျးထနျလာတယျ။ သူနာမှာတှေ မနာမှာတှေ ဘာမှမစဉျးစားနိုငျတော့ဘူး။ စိတျဆန်ဒအတိုငျးလှတျလှတျလပျလပျ အားရပါးရထိုးဆောငျ့ရငျး အဆုံးစှနျရောကျသှားတဲ့ခံစားခကျြနဲ့အတူ ကနြေျာ့လိငျတံဟာ တဆတျဆတျခါလာပွီး သူ့ရဲ့ လမျးကွောငျးလေးထဲကို သုကျရညျနှေးနှေးတှေ ပနျးထုတျလိုကျတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ ကနြေျာ့ကြောထဲကိုနဈနတေဲ့လကျသညျးရှညျလေးတှဟော စူးခနဲ ပိုစိုကျဝငျလာပွီး သူ့ခန်ဓာကိုယျလေးဟာ တဈခကျြတောငျ့တငျးသှားပွီး တိရစ်ဆာနျရိုငျးမလေးတဈကောငျလို မသဲမကှဲအသံတဈခုကို ခပျတိုးတိုးအျောညညျးလိုကျရငျး သူ့ရဲ့ မိနျးမကိုယျကွှကျသားတှဟော ကနြေျာ့လိငျတံကို ညှဈလိုကျပွီး တဆတျဆတျတုနျခါလာတယျ။ နှဈယောကျလုံး တဈယောကျကိုတဈယောကျ တငျးတငျးဖကျထားရငျး လှိုငျးတှကေို တငွိမျ့ငွိမျ့စီးပွီး ကမ်ဘာကွီးရဲ့ထိပျဆုံးကို ရောကျသှားကွတယျ။
ဟိုးအမွငျ့ကွီးကနေ တဖွညျးဖွညျးပွနျကလြာတဲ့အခါမှ သူရောကနြျောရော သတိဝငျလာကွတယျ။ ကုတငျဘေး စားပှဲပျေါက wet tissue ဘူးကိုလှမျးယူပွီး သူ့ကိုရော ကနြေျာ့ကိုယျကနြျောရော သုတျသငျသနျ့ရှငျးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ သူ့ရဲ့ အမှေးပှစောငျလေးကို အတူတူခွုံရငျး လကျမောငျးပျေါမှာ ခေါငျးအုံးပွီးအိပျနတေဲ့ နူးညံ့နှေးထှေးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျလေးကို ဖကျထားလိုကျတယျ။ သူ့မကျြနှာလေးက ကနြေျာ့ပခုံးနဲ့လညျပငျးကွားမှာ ဖှကျထားပွီး ကနြျောက ရှမျပူနံ့ သငျးပြံ့တဲ့ သူ့ဆံပငျ ညိုညိုပြော့ပြော့လေးတှပေျေါမှာ မကျြနှာအပျထားတယျ။ ကနြေျာ့ဘဝမှာ ဒီအခိုကျအတနျ့လောကျ အရာရာပွညျ့စုံနတေယျလို့ ခံစားရတဲ့အခြိနျ တဈခါမှ မရှိဖူးဘူး….!!!!
“ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက်” “ဆရာ၊ ဆရာ၊ ဆရာကိုတာရာ၊ ခြံရှေ့မှာ ဧည့်သည်ရောက်နေတယ်။” ထမင်းချက် အိမ်ထိန်း အဒေါ်ကြီး မနန်းပုံရဲ့ အခန်းတံခါးကို ဆက်တိုက်ခေါက်သံနဲ့အတူ ခြံရှေ့က လူခေါ်ဘဲလ်ကိုအဆက်မပြတ် တီးသံကြောင့် ကျနော်လန့်နိုးလာတယ်။ ကျနော့်လက်မောင်းပေါ် ခေါင်းအုံးပြီးအိပ်နေတဲ့ ခမ်းစုမီလဲ မျက်လုံးပွင့်လာတယ်။ “မနန်းပုံ၊ မနက်အစောကြီး ဘယ်ကဧည့်သည်လဲဗျ။” “ခမ်းစုမီရည်းစား ဟိုအဆိုတော်ကောင်လေးရောက်နေတာ။” ကျနော် ဝုန်းဆိုပြီး ခုတင်ပေါ်ကခုန်ဆင်းလိုက်မိတယ်။ အခန်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပြီး လျှောက်လမ်းကနေ ဧည့်ခန်းထဲ ဝင်ပြီး သော့တွဲကိုယူတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်တံခါးဖွင့်ပြီး ခြံထဲကို ခြေလှမ်းကျဲကျဲနဲ့ဖြတ်လျှောက်လာတယ်။ ခြံဝမှာ သံပန်းတံခါးကိုကိုင်လှုပ်လိုက်၊ ဘဲလ်တီးလိုက် လုပ်နေတဲ့ စဝ်ခွန်နောင်ကို တွေ့ရတယ်။ သူ့ဘေးမှာလဲ ခရီးဆောင်အိတ်တစ်အိတ်ကို မြေကြီးပေါ်ချထားတယ်။ ခုမှ ကားပေါ်ကဆင်းလာပြီး အိမ်တောင် မပြန်ရသေးတဲ့ပုံပဲ။
ကျနော် သော့ဖွင့်ပြီး သံပန်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပေးရင်း မေးလိုက်တယ်။ “ခွန်နောင်၊ မင်းဘာဖြစ်လာတာလဲ။ အေးအေးဆေးဆေး ပြောလို့ရပါတယ်။” ကျနော်တံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ပေးလိုက်ချင်းပဲ ခွန်နောင်က ဝုန်းကနဲပြေးဝင်လာတယ်။ ပြီးတော့ ဘာမပြောညာမပြော ကျနော့်မျက်နှာကို လက်သီးနဲ့ပစ်ထိုးလိုက်တယ်။ “ခွပ်” “စိုင်းတာရာမောင်၊ ဒါတွေအားလုံး ခင်ဗျားကြောင့်၊ ခင်ဗျားဇာတ်လမ်းရှုပ်လို့ဖြစ်ရတာ။” အလစ်မို့ ကာချိန်မရဘဲ ခံလိုက်ရတယ်။ လက်သီးက အပေါ်နှုတ်ခမ်းနေရာကိုကျလာပြီး မျက်စိထဲမှာ မီးပွင့်သွားတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာငန်ကျိကျိအရသာ ရလာတယ်။ နှုတ်ခမ်းကွဲသွားပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်။ အသားနာသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း စဉ်းစားချိန်မရလိုက်ဘဲ ခွန်နောင့်ဂျာကင်ကော်လာကို စုကိုင်ပြီး မျက်ခွက်ကို ပြန်ထိုးလိုက်တယ်။ နှာခေါင်းကိုထိပြီး သွေးတွေကျလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ထဲက ပြေးထွက်လာတဲ့ ခမ်းစုမီရယ် မနန်းပုံရယ်၊ ခြံစောင့်အိမ်ထဲက မြက်ခုတ်ဓားတစ်ချောင်းဆွဲ ပြီးထွက်လာတဲ့ မနန်းပုံယောက်ျား ဗဟာဒူးရယ် ခြံဝကိုရောက်လာကြတယ်။
“ခွန်နောင် နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ” ခမ်းစုမီက အံကြိတ်ထားတဲ့ကြားက ထွက်လာတဲ့လေသံနဲ့မေးတယ်။ “နင့်ကိုငါလာတောင်းပန်တာ။” “ငါအမျိုးမျိုး တောင်းပန်တိုးလျိုးခဲ့တုန်းက နင်အသည်းမာမာနဲ့ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့ပြီး အခုမှ လိုက်လာရသလား။မလိုတော့ဘူးခွန်နောင်။” “ငါအခု ဆုပန်ရွယ်ကို ဖြတ်ခဲ့ပြီစုမီ။ နင့်ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ နင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေပါစေ ငါလက်ခံမယ်။ ပြသနာမရှာတော့ဘူး။” ခွန်နောင်က နှာခေါင်းဝကသွေးတွေကို ဝတ်ထားတဲ့တီရှပ်နဲ့သုတ်ရင်း ပြောတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့စကားတွေကို ကျနော်အပြည့်အဝနားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကြားထဲမှ ရှင်းဖို့လိုနေတဲ့ ပြသနာတစ်ခုရှိနေမှန်းသိတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာ ပြည့်လာတဲ့ တံတွေးနဲ့ရောနေတဲ့သွေးတွေကို ထွေးထုတ်လိုက်ရင်း မနန်းပုံနဲ့ ဗဟာဒူးကို တော်ရာသွားနေဖို့လက်ပြလိုက်တယ်။
“မရဘူး။ ဒီဇာတ်လမ်းကို နင်ဖြတ်ခဲ့တာ။ အခုမှပြန်ဆက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့။ ငါတတ်နိုင်သမျှ နင်စိတ်ကျေနပ်အောင် နေပေးခဲ့တယ်။ နင့်ရဲ့စွပ်စွဲမှုတွေအောက်မှာ ငါအရမ်းစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါကျိတ်မှိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ နင်တက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း မန္တလေးကိုလည်း ကျောင်းပြောင်းတက်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုနင်ကမကျေနပ်နိုင်ဘူး။ အမြဲတမ်း ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှာတယ်။ မကျေမနပ်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံး ငါနင့်အနားမှာ မနေနိုင်တော့တဲ့အထိလုပ်တယ်။ အဲဒီလိုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့ပါလို့ ခေါ်တာကို ငါဘယ်လိုလိုက်ရမလဲ။” ခမ်းစုမီမျက်နှာလေးက နီရဲနေတယ်။ မျက်လုံးညိုညိုတွေထဲမှာ မျက်ရည်တွေလည်လာတယ်။ “ခွန်နောင်၊ မင်းတို့ပြဿနာတွေ ငါမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ခမ်းစုမီကို မင်း စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်ခဲ့တာတော့သေချာတယ်။ ပြီးတာတွေ ထားလိုက်တော့။ နောက်ထပ်တော့စိတ်ဒုက္ခမပေးပါနဲ့။”
“ဟားဟားဟား…” ကျနော်ဝင်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခွန်နောင်က ခေါင်းကို နောက်လှန်ချပြီး ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်လိုက်တယ်။ မျက်နှာနဲ့ သွားတွေပေါ်မှာ သွေးတွေပေကျံနေတဲ့ သူ့ပုံစံက အရူးတစ်ယောက်နဲ့တူနေတယ်။ “ဒီမှာ၊ ကျုပ်နဲ့ စုမီနှစ်ယောက်တည်းရှိရင် လောကကြီးက သာသာယာယာပဲဗျ။ ခင်ဗျားရှိလို့ ရှုပ်နေတာ။ ခမ်းစုမီကို တလျောက်လုံး စိတ်ဒုက္ခအပေးခဲ့ဆုံးလူဟာ ခင်ဗျားပဲ။” “ခွန်နောင်၊ နင်ကိုကို့ကို ဒီလိုမပြောနဲ့” “ငါပြောတာအမှန်တွေမဟုတ်ဘူးလား။ ဟိုက နင့်ကို ရှိတယ်ထင်လား။ နင်ကသာတဖက်သတ်ကြိုက်နေတာ။ ညီမလိုဂရုစိုက်တာကို သာယာနေတာ။ သူကအချိန်တန်ရင် စင်ကာပူက သူ့ရည်းစားနဲ့သူ ယူသွားမှာ။ နင့်ကိုထားခဲ့မှာ။ ဒါကို နင်က သံယောဇဉ်မပြတ်နိုင်ဘူး။ ငါနဲ့ကြိုက်တာတောင်မှ သူက နင့်ကိုတွဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာလို့ စိတ်လေပြီးတွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။” ကြားရတဲ့စကားတွေကြောင့် ကျနော်အံ့အားသင့်သွားမိတယ်။ ခွန်နောင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ။
“အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေ ငါဘယ်လိုတတ်နိုင်မှာလဲ။ နင်နဲ့တွဲကတည်းက နင့်အပေါ်ငါ တကယ်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ချစ်ခဲ့တယ်။ နင်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုလဲ တတ်နိုင်သမျှလိုက်လျောခဲ့တယ်။ အဲဒါကို နင်ကမကျေနပ်နိုင်ဘဲ အမြဲတမ်းပြသနာရှာနေခဲ့တာ။ အခု အရွဲ့တိုက်ပြီး တခြားမိန်းမနဲ့ကြိုက်တယ်။ ငါအသည်းလဲကွဲရတယ်၊ အရှက်လဲကွဲရတယ်။ “ “မရှာဘဲ ဘယ်လိုနေရမှာလဲ။ နင့်စိတ်က ငါ့ကိုချစ်တယ်သာပြောတာ နင်ဟိုကောင့်ကို မသိစိတ်ထဲကမျှော်လင့်နေတာ သိနေတာပဲ။ တလျှောက်လုံး ငါ့မှာ ခံစားခဲ့လိုက်ရတာ။ ငါ့ကိုတကယ်ချစ်ရင် ကျောင်းပြီးခါနီးလက်မှတ်ထိုးထားမယ်ဆိုတာလဲ ထိုးနိုင်ရမှာပေါ့။ နင်ကခါးခါးသီးသီးပဲ။” “ငါ့အသက် ၂၀၊ ယောက်ျားယူရမယ့်အရွယ်မဟုတ်သေးဘူး။ “ ခွန်နောင်က အရူးလိုထပ်ရယ်ပြန်တယ်။ ခမ်းစုမီရဲ့ ပခုံးနှစ်ဘက်ကို ဆွဲခါတယ်။ ကျနော်သူ့လက်တွေကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကိုဆောင့်တွန်းလိုက်တယ်။ မီ့ကို ကျနော့်နောက်ကျောဘက်ကို ပို့ထားလိုက်တယ်။
“ဒီမှာစုမီ၊ နင်အပိုတွေမပြောနဲ့။ နင့်စိတ်နင်ပြန်ကြည့်။ ငါနဲ့တော့ ငယ်သေးတယ်တဲ့။ စိုင်းတာရာမောင်ကသာနင့်ကိုယူမယ်ဆိုရင် နင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလား။ မလိမ်ဘဲ အမှန်အတိုင်းဖြေ။” ခမ်းစုမီငိုနေပြီ။ မျက်နှာလေးက နီစုတ်ပြီး မျက်ခွံတွေမို့နေတယ်။ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားပြီး ကျိတ်ကျိတ်ပြီးရှိုက်နေတယ်။ “ဟုတ်တယ်၊သူကသာယူမယ်ဆိုရင် ယူမှာ။ ငါ့ဘဝမှာ ငါ့အပေါ်ကောင်းတာ သူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ သူ့ကိုငါချစ်တယ်။ နင့်ကိုပြောင်းချစ်ဖို့ ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နင်က စိတ်မလုံခြုံဘဲ ငါ့ကိုအမြဲသဝန်တိုခဲ့တယ်။ နင်အဲလိုလုပ်တာတွေက ငါ့ကိုဝေးအောင်တွန်းပို့နေသလိုပဲ။ အခု ငါသိပြီ။ နင့်ကိုဘယ်လိုမှ ချစ်လို့မရဘူး။ နင်နဲ့ငါဇာတ်လမ်းပြီးပြီ၊ နင်ပြန်တော့။” ခမ်းစုမီက ချာကနဲလှည့်ပြီး အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ ခွန်နောင်က ပြေးလိုက်ဖို့ပြင်တယ်။ လက်မောင်းတဖက်က လည်ပင်းကိုနောက်ကျောကနေ ဖက်ညှစ်ထားပြီး ကျန်တဲ့လက်တဖက်နဲ့ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ကျောမှာ ပူးကိုင်ပြီးချုပ်ထားလိုက်တယ်။
“ဒီမှာခွန်နောင်၊ ဖြစ်ခဲ့တာအကုန်လုံးအတွက် ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘယ်သူမှ တမင်တကာလုပ်ခဲ့တာလဲ မပါဘူး။ သူ့အလိုအလျောက် ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမို့ မင်းလည်း ခုချိန်မှာ ဘာမှ ပြောင်းလဲလို့ရတော့မယ်မထင်ဘူး။ ငါခမ်းစုမီကို အရင်က ညီမလိုပဲ။ ဟုတ်တယ်။ အခုရည်းစားလိုကြိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ မင်းပြန်ပါတော့။ ရည်းစားအသစ်နဲ့ ပျော်ပျော်နေပါ။” သူ့နားနားကို ကပ်ပြီး လေသံအေးအေးနဲ့ပြောရင်း ခြံပြင်ကို ဆွဲထုတ်လာခဲ့တယ်။ ခြံတံခါးကျော်တော့ လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး သူ့ခရီးဆောင်အိတ်ကို လက်ထဲကောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ခွန်နောင်က အိတ်ကို ယူလိုက်ပြီး နီရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကျနော့်ကို အံကြိတ်ပြီးကြည့်တယ်။ ခြံတံခါးကို နှစ်ချက်သုံးချက် ဆောင့်ကန်တယ်။ ပြီးတော့ မလှမ်းမကမ်းက ဆိုက်ကယ်တက်စီ ဂိတ်ဘက်ကို ခြေလှမ်းကြဲကြဲနဲ့ ထွက်သွားတယ်။
တံခါးကို သော့ပြန်ခတ်ရင်း ကျနော့်အတွေးတွေ ချာချာလည်နေတယ်။ မီနဲ့ ခွန်နောင် ပြဿနာဖြစ်ကြတာ ကျနော့်ကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ တစ်ခါမှမထင်ခဲ့မိဘူး။ ပိုဆိုးတာက မီကျနော့်ကို စိတ်ဝင်စားနေလိမ့်မယ်လို့ သိကိုမသိခဲ့ဘူး။ အိမ်ဘက်ကို ပြန်လျှောက်လာတဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာ လေထဲမှာလျှောက်နေရသလိုပဲ။ အခန်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ သူမရှိတော့ဘူး။ စိတ်ပူသွားပြီး သူ့အခန်းထဲပြေးကြည့်မိတယ်။ ပန်းနုရောင် အိပ်ရာခင်းတွေနဲ့ မိန်းကလေးဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ခုတင်လေးပေါ်မှာ အမွေးပွစောင်ကို အလုံးလိုက်လေးခြုံထားပြီး တသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငိုနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမြင်မှ စိတ်အေးသွားတယ်။ စောင်ကိုဆွဲဖယ်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးလေးကိုဖက်ထားမိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်ကလိုပဲ ကျနော့်ပခုံးမှာ ပူနွေးတဲ့ သူ့မျက်ရည်တွေနဲ့စိုရွှဲသွားတယ်။
ပခုံးပေါ်ကို စီးကျနေတဲ့မျက်ရည်နွေးနွေးတွေ စဲသွားတဲ့အချိန်အထိ၊ ရှိုက်သံလေးတွေ ကျဲသွားတဲ့အချိန်ထိ သူ့ကျောလေးကို ပွတ်ပေးရင်း ဖက်ထားပေးမိတယ်။ “ကိုကို လုံးဝမသိခဲ့ဘူး၊ နည်းနည်းလေးမှတောင် မရိပ်မိခဲ့ပါဘူး။ ကိုကိုတောင်းပန်ပါတယ် မီရယ်။” သူ့ခေါင်းထိပ်ကလေးကို နမ်းရှိုက်ရင်း နူးညံ့တဲ့ ဆံပက်ပျော့ပျော့လေးတွေထဲကို ခပ်တိုးတိုးပြောမိတယ်။ “သိခဲ့ရင်… ပိုဆိုးမှာပေါ့။ ကိုကို့မှာ မအေမီရှိတာပဲ။ ပြီးတော့… မီ့အပေါ်… ကိုကိုရိုးရိုးသားသားပဲ သဘောထားတာ… မီသိပါတယ်။” သူက ရှိုက်သံလေးတဝက်နဲ့ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလေးပြောတယ်။ အေမီနဲ့ဆက်ဆံရေးကို သူ့ကို ရှင်းမပြခဲ့မိတဲ့အတွက် ကျနော် အကြီးအကျယ်နောင်တရမိတယ်။ “ညီမလေးထင်သလိုမဟုတ်ဘူး မီ။ ကိုကိုနဲ့အေမီက အဲလိုဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ဘူး။ နောက်မှရှင်းပြမယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ကိုကိုနဲ့အေမီဟာ ဘာနှောင်ကြိုးမှမရှိဘူးဆိုတာ မှတ်ထားပေးပါ။”
သူ့ရှိုက်သံလေးတွေ ပြန်စိပ်လာပြန်တယ်။ ရင်ခွင်ထဲက ကိုယ်လုံးနွေးနွေးလေးဟာ တသိမ့်သိမ့်ခါနေတယ်။ “မီ့ကို… ချစ်မယ့်သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ ဖေဖေကလဲ… မီမှတ်မိတဲ့အချိန်မှာ သေသွားပြီ။ မေမေကလဲ… သူ့ကိုယ်သူပဲချစ်တယ်။ မီကလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ဘူး။ အိမ်ပြောင်းလာတဲ့နေ့ ကိုကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီး… မီ့ကိုချစ်မယ့်သူရလာတယ်။ အဲဒီနေ့က ကိုကိုဖက်ထားပေးတာ ခုထိမှတ်မိသေးတယ်။ အခု…ဖက်ထားသလိုမျိုးပဲ။ ကိုကိုနိုင်ငံခြားသွားတဲ့အချိန်က…အရမ်းဝမ်းနည်းတာ။ တစ်ရက်မှ မပျော်ဘူး။ ကိုကိုနဲ့စကားပြောရရင် ပိုလွမ်းတယ်။ အဲဒါကြောင့်…နောက်ပိုင်း ဖုန်းမပြောတော့ဘူး။” “ကိုကို မသိခဲ့ဘူး မီရယ်။ အဲဒီတုန်းက ဘာလို့မတားခဲ့တာလဲ။ “ “မီ မန္တလေးမှာကျောင်းသွားတက်မှာ ကိုကိုမတားသလိုပဲပေါ့။ မတားရက်ဘူး…ကိုကို့ဘဝကို ချုပ်မထားချင်ဘူး။”
သူ့မေးလေးကို ဆွဲမော့ပြီး မျက်ရည်တွေစိုရွှဲ မို့အစ်နေတဲ့ မျက်နှာဖူးဖူးလေးကို နေရာအနှံ့နမ်းမိတယ်။ သူ့မျက်ရည်တွေကို ကျနော့်ပါးနဲ့သုတ်လိုက်၊ လက်နဲ့သုတ်လိုက်၊ မျက်ရည်ပေစွန်းနေတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေ၊ ပါးလေးတွေ၊ နဖူးလေးတွေ၊ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ညင်ညင်သာသာလေး နမ်းလိုက်နဲ့ သူအငိုတိတ်စပြုလာတယ်။ ကျနော့် နှုတ်ခမ်းကို သူ့နှုတ်ခမ်း နွေးနွေးစိုစိုလေးတွေနဲ့ ဖွဖွလေး ပြန်နမ်းတဲ့အချိန် ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ ဒါ သူ့ဆီကရဖူးတဲ့ ပထမဆုံး တုံ့ပြန်အနမ်းပဲ။ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းကို မထိတထိ ကပ်ထားရင်း သူကဆက်ပြောတယ်။ သူ့အသံလေးကို အနီးကပ်ကြားရရုံမကဘူး နှုတ်ခမ်းကပါ အသံလှိုင်းရဲ့တုန်ခါမှုလေးကို ခံစားရတယ်။ ” ကိုကိုပြန်လာတော့ အရမ်းပျော်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟိုမှာ ရည်းစားကျန်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုကိုတစ်နေ့ အိမ်ထောင်ပြုမှာပဲ၊ မီတစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတယ်။
ကိုကိုနဲ့အတူ အရမ်းပျော်ရတဲ့နေ့ရက်တွေ တစ်နေ့မှာအဆုံးသတ်သွားမှာတွေးမိတိုင်း အရမ်းဝမ်းနည်းခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် မီလည်း ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ့် လူတစ်ယောက်ကို ရှာဖို့ကြိုးစားမိတယ်။ မီ့တသက်လုံးမှာ အကြီးဆုံးအမှားပဲ။ ကိုကို့နေရာမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ အစားထိုးလို့မရဘူး။ “ သူ့ရဲ့ တိုးတိတ်ညင်သာတဲ့ တစ်ခွန်းချင်း စကားသံလေးကိုနားထောင်ရင်း ကျနော့်ရင်ထဲမှာ ဆို့နစ်လာတယ်။ မှတ်မိသလောက် အမေဆုံးကတည်းက တစ်ခါမှထပ်မကျခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟာ မျက်လုံးထဲမှာ အိုင်ဖွဲ့လာတယ်။ ” အခု အစားထိုးစရာ မလိုတော့ဘူး။ အစကသိခဲ့ရင် ညီမလေးကို ဒီဟာတွေအားလုံးကို တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းရအောင် နာကျင်ရအောင် လုံးဝအဖြစ်ခံခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ မီ့ကို ကိုကိုချစ်တယ်။ အရင်က ကလေးလိုချစ်တယ်၊ အခု ကလေးလိုရော ချစ်သူလိုရောချစ်တယ်။” ပြောပြီးတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုနောက်တစ်ခါ နမ်းလိုက်တယ်။ စောစောကအနမ်းက မေတ္တာအပြည့်နဲ့ နမ်းတဲ့အနမ်း။ အခုတစ်ကြိမ်က မေတ္တာရော ရမ္မက်ပါ ရောပြွမ်းတဲ့အနမ်း။ ညင်ညင်သာသာ နမ်းရင်းကနေ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းထန်လာတယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းပန်းသွေးရောင် ဖူးဖူးလေးတွေကို အထက်နှုတ်ခမ်းတစ်လှည့် အောက်နှုတ်ခမ်းတစ်လှည့် ကြေမွမတတ် နမ်းစုပ်မိတယ်။ ကျနော့်မျက်ရည်တစ်စက်က သူ့ပါးပြင်ပေါ် ကျသွားတယ်။ သူ့ပါးစပ်လေးထဲကို လျှာကိုထိုးသွင်းပြီး ပါးလှစ်ချိုမြတဲ့ သူ့လျှာလေးနဲ့ ပွတ်တိုက်ကစားရင်း ကတ္တီပါသားလို နူးညံ့ချောမွတ်တဲ့ ပါးစောင်လေးတွေ၊ ညီညာတဲ့ သွားတန်းလေးတွေ၊ သွားဖုံးသားလေးတွေကို စူးစမ်းမိတယ်။
နမ်းနေရင်း ကျနော့်လက်က ညကဖြုတ်ခဲ့တဲ့ သူ့ညဝတ်အင်္ကျီရင်ဘတ်ကြယ်သီးလေးတွေကို တစ်ခါ ထပ်ဖြုတ်မိပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ့အင်္ကျီလေးကို တစ်ခါတည်း ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ နို့သီးထိပ်ပန်းနုရောင်လေးတွေ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ တင်းတောင်နေတဲ့ နုအိတဲ့ ရင်သားထွားထွားတစ်စုံကို ဒုတိယအကြိမ် မြင်ရပြန်တယ်။ သူကလည်း ကျနော့် တီရှပ်လက်ရှည်ကို ခါးကနေ ကိုင်ပြီး မချွတ်ပေးတယ်။ ကျနော် လက်နှစ်ဘက်ကို အလိုက်သင့် မြှောက်ပေးလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံး အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းသွားကြတဲ့အခါ ညက မချွတ်ရက်ခဲ့တဲ့ သူ့ ညဝတ်ဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ကျနော့် အားကစားဘောင်းဘီကိုလည်း ချွတ်ချလိုက်တယ်။ သူ့အိပ်ရာလေးပေါ်မှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းနဲ့ ကမ္ဘာဦးကလူသားနှစ်ယောက်လို ဖြစ်နေကြတယ်။ အဝတ်တွေက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပုံကျနေတယ်။ သူ့နို့လေးတွေကို ကျနော့်လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်ထဲမှာ ဆုပ်နယ်ပေးတော့ သူခပ်တိုးတိုးလေး ညည်းတယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ဖက်ကို တလှည့်စီစို့ရင်း လျှာနဲ့ဝိုက်ပြီး ကစားပေးလိုက်တယ်။ နို့အုံသား ဝင်းဝင်းလေးတွေကိုပါ နမ်းစုပ်မိတယ်။ သူ့အသားက နုတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းစုပ်မိတဲ့ တချို့နေရာလေးတွေမှာ သွေးချည်ဥပြီး ရဲလာတယ်။ ညကလို အပြစ်ရှိတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ မဟုတ်တော့တဲ့အခါ ခံစားချက်တွေဟာပိုကောင်းပြီး ပိုပြီး ပြင်းထန်လာတယ်။
အသက်မရှူစတမ်း နမ်းစုပ်နေပြီး မောလာလို့ နှုတ်ခမ်းကို ခဏခွာလိုက်တဲ့အခါ သူက မထင်မှတ်တာတစ်ခုကို လုပ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်ခါးကိုဖက်ပြီး ရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်းတိုးဝင်ပြီး ကျနော့်နို့သီးခေါင်းတစ်ဖက်ကို စို့ပေးတယ်။ သူ့တံတွေးလေးတွေနဲ့ စိုရွှဲနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းကို လျှာနွေးနွေးလေးနဲ့ လျက်ပေးတဲ့အခါ ဓာတ်လိုက်သလိုခံစားချက်ဟာ ပေါင်ကြားထဲအထိ ကျဉ်တက်သွားတယ်။ နှစ်ဖက်လုံးကို စို့ပြီးတဲ့အခါ ကျနော့်လိင်တံဟာ နောက်ထပ် ဒီထက်ပိုပြီး မမာနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အထိ မာတောင်လာတယ်။ ရမ္မက်လှိုင်းတွေဟာ ဒီရေလိုတရိပ်ရိပ်တိုးလာတယ်။ ရုတ်တရက် ကျနော်ညကတည်းက လုပ်ချင်ပေမယ့် ပုံမှန်စိတ်နဲ့ဆို လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်လိုက်မိတယ်။ ခုတင်အောက်ကိုဆင်းပြီး သူ့ကို ခုတင်စွန်းမှာ ခြေတွဲလောင်းချထိုင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင် ဆွဲယူလိုက်တယ်။ ခုတင်က နိမ့်တော့ သူ့ခေါင်းလေးနဲ့ ကျနော့်ခါးနဲ့ ကွက်တိပဲ။ လိင်တံကို ကိုင်ပြီး စောစောကနမ်းထားတဲ့အရှိန်နဲ့ နှင်းဆီဖူးလေးလို ထူအမ်းဖောင်းကြွနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားကို ထိပ်ဖူးကို ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ သူက မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး အလိုက်သင့်လေးဟပေးတယ်။ သူ့ပါးစပ်လေးနဲ့ ဖောင်းကားတင်းမာနေတဲ့ ကျနော့်ထိပ်ဖူးဟာ ဆံ့တယ်ဆိုရုံလေးပဲ။ ကတ္တီပါသားလို နူးညံ့စိုစွတ်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ပါးစပ်ကလေးထဲကို တိုးဝင်ရတဲ့ခံစားချက်ဟာ ကောင်းလွန်းလို့ ဖော်ပြလို့မရဘူး။ လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိပ်ဖူးအရစ်ကို ပတ်ချာလည် လျက်ပြီး အကွဲကြောင်းလေးကို ထိုးကလိပေးလိုက်တဲ့အခါ ကျနော့်ကိုယ်ထဲက အကြောပေါင်းတစ်ထောင်ဟာ စိမ့်သွားပြီး သူ့ခေါင်းလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီးအတံသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်အထိ ထိုးသွင်းလိုက်မိတယ်။ နောက်ထပ်သုံးမိနစ်လောက် သူ့ပါးစပ်ကလေးနဲ့ စုပ်ပေးတာကို ခံရတဲ့အခါ နတ်စည်းစိမ်ဆိုတာ ဒီလိုဟာမျိုးပဲလို့ ကျနော်သေချာသွားတယ်။
ခဏနေတော့ ကျနော့်လိင်တံကို သူ့ပါးစပ်ထဲက ချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ကို အိပ်ရာပေါ် သာသာလေး လှဲချလိုက်တယ်။ သူကလဲ ကျနော့်ခါးကိုဖက်ပြီး သူ့အပေါ် ဆွဲမှောက်တယ်။ အိပ်ရာပေါ်မှာ မိတ်လိုက်နေတဲ့မြွေနှစ်ကောင်လို ခဏတာ ပူးယှက်တွန့်လိမ်နေပြီးတော့ ကျနော့်လက်ဟာ တစ်ခါမှ မစမ်းဖူးတဲ့ သူ့ပေါင်ကြားက အင်္ဂါဇာတ်လေးကို အုပ်ကိုင်မိတယ်။ အညိုရောင် အမွေးနုလေးတွေနဲ့ မို့မို့ဖောင်းဖောင်းလေး။ ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲကားပြီးကြည့်လိုက်တော့ နှုတ်ခမ်းသားဖောင်းဖောင်းလေးတွေဟာ ပန်းညိုရောင်သမ်းနေတယ်။ အရည်ကြည်လေးတွေထွက်ပြီး နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖတ်လုံး စိုလက်နေတယ်။ လက်ချောင်းတွေနဲ့ နှိုက်ကစားပေးတော့ ကျနော့်ကိုယ်လုံးအောက်မှာ သူတွန့်လိမ်ညည်းတွားနေတယ်။ “ကိုကို…ကိုကို… ” လို့ခေါ်နေတဲ့ အသံသဲ့သဲ့လေးဟာ တစ်စုံတစ်ရာကို တောင်းဆိုနေတယ်။ ကျနော် သူ့ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို နည်းနည်းထပ်ပြီးဆွဲကားလိုက်ရင်း ကြားထဲကလွတ်သွားတဲ့နေရာမှာ ဒူးထောက်နေရာယူလိုက်တယ်။လက်တစ်ဖက်ကိုထောက်ထားရင်း လိင်တံကို ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး အကွဲကြောင်းလေးထဲက လမ်းကြောင်းအဝလေးထဲကို ထိပ်ဖူးကို ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ စီးပိုင်ပြီး နွေးနွေးကျပ်ကျပ်လေးဖြစ်နေပေမယ့် သူ့အရည်လေးတွေရော၊ ကျနော့်အရည်ကြည်တွေရောပေါင်းပြီး ချောဆီလိုဖြစ်နေလို့ ထိပ်ဖူးတော့ ဝင်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်မထားတဲ့ အတားအဆီးတစ်ခုကို ဒုတ်ခနဲ တိုးမိပြီး ကျနော်တန့်သွားတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီး ဆက်တိုးကြည့်တော့ တကယ်ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော့်ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်းခုန်လာတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မျက်လုံးတွေတောင်ပြာလာသလိုပဲ။ ခြောက်ကပ်နေတဲ့လည်ချောင်းထဲက အနိုင်နိုင်ထွက်လာတဲ့အသံက ပြတ်တောင်းပြီး အက်ကွဲနေတယ်။
“ခွန်နောင်နဲ့ တစ်ခါမှ…. ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ သူလဲ အသက်ကို အမောတကောရှူနေရတယ်။ ရင်ဘတ်လေးဟာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ လှိုင်းထနေတယ်။ “တခြားဟာတွေ လုပ်ဖူးတယ်…တစ်ခါမှ…ဒီအထိမရောက်ဖူးဘူး။” တိုးတိတ်တဲ့ဖြေသံလေးအဆုံးမှာ ကျနော်သူ့ကို ငုံ့ပြီးနမ်းလိုက်မိတယ်။ နှုတ်ခမ်းကို အငမ်းမရ နမ်းစုပ်ရင်း သူ့ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားမိတယ်။ နမ်းပြီးသွားတောိ့ကိုယ်လုံးလေးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဆက်ပြီးဖက်ထားရင်း ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကို ထောက်ပြီး ထိပ်ဖူးရဲ့ရှေ့မှာ တားဆီးနေတဲ့ အမြှေးပါးလေးထဲကို ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ ဒုတ်ခနဲ ဆောင့်မိသွားပြီး အ…ဆိုတဲ့ အံကြိတ်ညည်းတွားလိုက်သံလေးနဲ့အတူ အတားအဆီးဟာ ကျိုးပြတ်သွားတာကို ခံစားလိုက်မိပြီး ကျပ်တည်းတဲ့ ကတ္တီပါလှိုဏ်ခေါင်းလေးထဲကို ကျနော့်လိင်တံဟာ လျှောဝင်သွားတယ်။ ခဏနားထားပြီး သူ့ကို ပွတ်သတ်ချော့မြူရင်း စပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လှုပ်ရှားလိုက်တယ်။
သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာ ကျနော့်အောက်မှာ လူးလွန့်နေတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ညည်းတွားသံ တိုးတိုးလေးနဲ့အတူ ခါးလေးကို ပင့်ပြီးကော့ပေးတယ်။ ကျနော့်ကျောကို မမီတမီလှမ်းဖက်ထားတဲ့ လက်လေးနှစ်ဖက်က လက်သည်းလေးတွေဟာ ကျနော့်အသားထဲကို နစ်ဝင်နေတယ်။ သူ့နို့လေးတွေ၊ ခါးသေးသေးလေး၊ တင်ပါးလေးတွေဟာ ကျနော့်လက်ထဲမှာ ပုံသွင်းရွှံ့စေးလိုပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းဟာ နီးကပ်လာတယ်။ လိင်တံဟာ ပိုတောင့်တင်းလာပြီး အထဲမှာ သုက်ရည်တွေ ရွေ့လျားလာတာကို ခံစားမိလာတယ်။ ကျနော်သူ့အပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး ဆီးခုံချင်းပူးကပ်ရင်း သွေးတွေစီးဝင်ပြီး ဖောင်းကြွနေတဲ့ အစေ့နေရာလေးကို လိင်တံနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ဆက်လုပ်တယ်။ ထိလိုက်လွတ်လိုက်ဖြစ်ပေမယ့် သူလည်း ပြီးဆုံးဖို့ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာကို ခံစားမိတယ်။ ကျနော့်ခံစားချက်တွေဟာ ပေါက်ကွဲထွက်လုမတတ်ပြင်းထန်လာတယ်။ သူနာမှာတွေ မနာမှာတွေ ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူး။ စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ် အားရပါးရထိုးဆောင့်ရင်း အဆုံးစွန်ရောက်သွားတဲ့ခံစားချက်နဲ့အတူ ကျနော့်လိင်တံဟာ တဆတ်ဆတ်ခါလာပြီး သူ့ရဲ့ လမ်းကြောင်းလေးထဲကို သုက်ရည်နွေးနွေးတွေ ပန်းထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျနော့်ကျောထဲကိုနစ်နေတဲ့လက်သည်းရှည်လေးတွေဟာ စူးခနဲ ပိုစိုက်ဝင်လာပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာ တစ်ချက်တောင့်တင်းသွားပြီး တိရစ္ဆာန်ရိုင်းမလေးတစ်ကောင်လို မသဲမကွဲအသံတစ်ခုကို ခပ်တိုးတိုးအော်ညည်းလိုက်ရင်း သူ့ရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကြွက်သားတွေဟာ ကျနော့်လိင်တံကို ညှစ်လိုက်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းတင်းဖက်ထားရင်း လှိုင်းတွေကို တငြိမ့်ငြိမ့်စီးပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ့ထိပ်ဆုံးကို ရောက်သွားကြတယ်။
ဟိုးအမြင့်ကြီးကနေ တဖြည်းဖြည်းပြန်ကျလာတဲ့အခါမှ သူရောကျနော်ရော သတိဝင်လာကြတယ်။ ကုတင်ဘေး စားပွဲပေါ်က wet tissue ဘူးကိုလှမ်းယူပြီး သူ့ကိုရော ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်ရော သုတ်သင်သန့်ရှင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အမွေးပွစောင်လေးကို အတူတူခြုံရင်း လက်မောင်းပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးပြီးအိပ်နေတဲ့ နူးညံ့နွေးထွေးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ဖက်ထားလိုက်တယ်။ သူ့မျက်နှာလေးက ကျနော့်ပခုံးနဲ့လည်ပင်းကြားမှာ ဖွက်ထားပြီး ကျနော်က ရှမ်ပူနံ့ သင်းပျံ့တဲ့ သူ့ဆံပင် ညိုညိုပျော့ပျော့လေးတွေပေါ်မှာ မျက်နှာအပ်ထားတယ်။ ကျနော့်ဘဝမှာ ဒီအခိုက်အတန့်လောက် အရာရာပြည့်စုံနေတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အချိန် တစ်ခါမှ မရှိဖူးဘူး….!!!!